Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya iyo Kenya – Kalfadhi
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya iyo Kenya
Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanaya xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ku muransan xuduud badeed islamarkaana ay dacwadiisa hor taalo Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ). Khilaafka labada dowladood oo saameen ballaaran yeeshay ayaa siyaabo kala duwan waxaa uga hadlay Golaha Wasiirada, Golaha Shacabka iyo Senatarro katirsan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhinacyadaan ayaa soo saaray baaqyo ku aadan qaboojinta xiisadda labada dhinac balse waxaa muuqata in wali ay dowladda Kenya qaadeyso talaabooyin diblomaasiyadeed oo saameeyay Soomaaliya. Dhinacyada ganacsiga iyo safarada siyaasiinta Soomaalida ayuu saameenta ugu weyn ku yeeshay go’aanadii ugu dambeeyay ee dowladda Kenya.
Xubno katirsan Golaha Shacabka iyo aqoonyahaano ayaa siyaabo is dhaafsan uga hadlay Khilaafka labada dowladood iyo sida ay tahay in ay talaabooyin dhankeeda ah ay qaado dowladda Soomaaliya.
Xildhibaan Cabduqaadir Cosobe oo ah Guddoomiyaha Guddiga Arimaha Dibadda ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u sheegay in aysan labada dal u wanaagsaneen khilaaf iyo go’aano wax u dhimaya midkood ay qaataan balse loo baahan yahay in laga wadahadlo arimaha taagan oo aan ka aheyn dacwadda badda ee hortaala Maxkamadda ICJ.
“Kenya waxay qaadatay go’aano oo aan ku wanaagsaneen diblomaasiyadda iyadoo cadaadineyso Soomaaliya laakiin sax ma ahan waa in ay ilaalisaa xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood ee aan kala maarmin” ayuu yiri Xildhibaan Cabduqaadir Cosoble oo ah guddoomiyaha Guddiga Arimaha Dibadda ee Golaha Shacabka.
“Umadda Soomaaliyeed ma ogolaan karto in taako kamid ah dhulkeeda la qaato si walba iyo goor kasta laakiin aniga hadda kuma qanacsani siyaasadda arimaha dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya waana sababta keentay in Kenya ay go’aanadaan qaadato” ayuu yiri Cabduqaadir Cosoble oo ah mudane katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Cabduqaadir Cosoble ayaa Kalfadhi u sheegay in hogaanka Dowladda Soomaaliya ay ku mashquulsan yihiin faragelinta doorashooyinka maamul gobaleedyada iyo sidii ay doorashada kale ugu guuleysan lahaayeen madaxda dowladda markii la gaaro 2020-ka balse aysan ka fikireyn danta dadka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay.
“Hogaanka DF-ka waxay ku mashquulsan yihiin arimaha doorashooyinka 2020-ka iyo faragelinta maamul gobaleedyada halkii ay ka mashquuleen marxaladaha kale ee siyaasiga ah iyo danguud” ayuu yiri Cabduqaadir Cosoble oo ah guddoomiyaha Guddiga Arimaha Dibadda ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalane xubin ka ah guddiga Gaadiidka iyo Dekadaha ee Golaha Shacabka ayaa sheegay in ay kawar qabaan saameenta ay gaadiidka cirka (diyaaradaha) ku yeelatay xiisadda labada dowladood oo gaartay heerkii ugu adkaa bilooyinkii la soo dhaafay oo ay go’aano adag qaadatay dowladda Kenya.
“Aad ayaa uga war-haayaa waxyaabaha dhacaya laakiin saameen kasta oo ka dhalata ma ahan mid noo qaadi karta in Baddeynna xoog lagu qaato ama cadaadis nala saaray aan uga tagno” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo aan kala maarmin waana in dowlad kasta ku xisaabtantaa sidaas, Kenya sida ay go’aan u qaadatay hadii aan annagana u qaadano waxbadan ayaa ku halaabaya waxayna arimahaan oo dhan muujinayaan guul darrada dacwadda Badda ee Kenya” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo wareysi Kalfadhi.
Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku taliyay in Shacabka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan dowladooda islamarkaana ay ku taageeraan go’aan kasta oo ay gaarto si midnimada dalka loo dareemo.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay garab istaagaan dowladooda si cadowga u dareemo midnimada iyo wadajirka umadda Soomaaliyeed” ayuu yiri Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ku taliyay in Ciidamada Kenya dalka laga saaro islamarkaana cadaadis la saaro Kenya si looga jawaabto talaabooyinka ay qaaday dowladda dalkaasi.
“Aniga waxaan dhihi lahaa waa in si deg deg ah dalka looga saaraa Kenya, maxay noo qabanayaan Ciidamo dowladoodii sidaas diblomaasiyadda ugu xadgudubtay” ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamanka Soomaaliya.
“Waxaan ku talinayaa in cadaadiska ay saartay dadka Soomaaliyeed mid lamid ah in la saaro Kenya, qaniinyo qaniinyo ayaa kaa fujisa annaga kaliya dan kuma qabno Kenya” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ah mudane katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Barafasoor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo ah aqoonyahaan ka faalooda arimaha siyaasadda iyo xiriirka Caalamiga ah ayaa Kalfadhi u sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaadatay daganaan siyaasadeed oo ku dhisan dulqaad iyo feejignaan siyaasadeed oo sal adag leh.
“DF-ka waxay qaadatay waa go’aan aamusnaan ah, mararka qaar aamusnaanta xal ayaa ku jira waana sidaan oo kale” ayuu yiri Barafasoor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo la hadlay Kalfadhi.
“Dano waa weyn ayaa isaga xiran Soomaaliya iyo Kenya mana jirto wax ka wanaagsan in ilaaliyo daganaan siyaasadeed” ayuu yiri Barafasoor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bare ka ah qaar kamid ah Jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Jubbaland “In maamul gobaleed kasta Albaabkiisa xirto danta ayaa ku jirto”
Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka oo Aqalka Sare ka dalbaday in aysan ansixin Sharci ka soo gudbay Golaha Shacabka